Blue duiker - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
© Roger de la Harpe/Africa Imagery
IBlue Duiker (Philantomba monticola)
I-Blue Duiker yeyona encinci eMzantsi Afrika. Imilinganiselo i-300 mm kwidxalaba nakwamabhinqa ubunzima be-4.7 kg, abesilisa abane-4 kg kuphela. Ingubo i-blue-grey. Zezini zesini ziphethe iimpondo ezibukhali, ezenzelwe ukufihla intlungu.
I-Blue Duiker itya amaqabunga amatsha, iziqhamo kunye neentyatyambo eziwa ehlathini.
Ezo zingabalimi zinexesha lazo, kunye nexesha lokunyuka kweentsuku ezingama-210. Kuzalwa incinane, ulinganisa amagremu ayi-400. Incinci ifihliwe kwiiveki ezimbalwa zokuqala emva kokuzalwa, kwaye emva koko iqhutyelwa kwintsimi yomzali xa ikhula ngokwesini malunga neentsuku eziyi-388.
Apho zifumaneka khona
I-Blue Duiker isasazwa ngokubanzi ukusuka kwiMpuma Koloni ukuya kwiindawo zaseNtshona Koloni. Nangona kunjalo, ngenxa yendawo yokuhlala kuyo indawo yokuhanjiswa njengento edibeneyo njengamahlathi athile ahlala eluhlaza. Ezi zityalo zihlelwa njengezinqabileyo kwi-South African Red Data Book.
iBlue Duikers ayaziwa ukuba itya amaqanda eentaka kunye nezinambuzane-ezenza i-omnivorous, nangona ukutya okubaluleke kakhulu kukuhlaza. Zixhaswa zii-eagles, ngokukodwa ihlathi elijikelezayo kwi-Eagle.